Kutheni ukuhamba ngebhayisikili kusenza sigqibelele - yintoni enokuyenza xa unama "amadolo"
Ukuhamba ngee-cycling kwi-osteoarthritis kunye neengxaki ezihlangeneyo zamadolo?
Ukusebenza komzimba kubangakanani ngexesha lokuhamba ngebhayisikili?
Ukuhamba ngebhayisikili yenye yezemidlalo yokunyamezela kunzima kwaye ibe ngumsebenzi ophelileyo wenhliziyo.
Qinisekile kwi-saddle - kutheni ukuhamba ngebhayisikili kusenza sihlale sifanelekile
Ukuba uhamba ngokukhawuleza kathathu okanye ezine ngesonto malunga nemizuzu ye-30, unokwandisa ubomi bakho kwimpilo ngeminyaka elishumi elungileyo.
Xa uhamba ngebhayisikili, i-saddle idla malunga neepesenti ze-75 zesisindo somzimba. Ngenxa yoko, amanxeba awaxinzekanga kwimilenze.
Ukuhamba ngebhayisikili kuya kwandisa amandla
Ukuhamba ngebhayisikile ngoko ke kukunye okunye okufanelekileyo ukuqhuma. Ikakhulukazi ekulwa nokunyanya ngokweqile kunye nebhakoni engavumelaniyo yokuhamba ngebhayisikili inegalelo elincedo.
I-75 kilogram yomntu iyatshisa i-720 kilocalories ngejubane eliphakathi kweyure enye emva koko. Oku kungaphezulu nje kwebhayilethi yetshokolethi.
Abantu abaninzi banesaba ukuba ukuhamba ngebhayisikili kunokubeka utyando olongezelelweyo kwi-articalular cartilage. Kodwa ama-orthopedists anika yonke into ecacileyo: Into echasene nayo, ekubeni ukunyakaza kwamavilo afanayo kukuphucula ukuthuthwa kwezondlo kwi-cartilage. Kwakhona, i-capsule kunye ne-meniscus bayazuza kuyo.
Kwaye abo banesifo semilanjeni ye-varicose akumele benze ngaphandle kwebhayisikili. Igazi eliphambeneyo liqhutyelwa kwinqanaba leemilenze, kufana nepompo entliziyweni. Oku ngokuqhelekileyo kusebenza bhetele kunamaphi amayeza.
Kubalulekile kubantu abaneengxaki zangemuva: soloko uqwalasela ukuhamba ngokuthe tye kwaye ukhethe ibhayisikili yaseDutch inqwelo yemoto.
Ukuze kube nempembelelo yempilo, kufuneka ujikeleze ubuncinane iiyure ezimbini ngeveki. Umthwalo womsebenzi kufuneka ukwanda ngokukhawuleza. Ukomeleza imeko, inelungelo lokukhenkceza phakathi kwinqanaba, ngaphandle kokuphefumula.
Ukuba isantya sisekuqaleni, uqeqesho olubizwa ngokuba lixesha loqeqesho linconywa. Nantsi isivinini esicacileyo nesiqhaqhaqhileyo enye imizuzu emihlanu. Ukuba kuyimfuneko, ikhefu elincinci lingeniswa.
Ngubani oqhuba umgama omde kwijubane eliphakathi, ukhulisa ioli. Ngaloo ndlela, i-cycling iyimidlalo efanelekileyo yokunciphisa umzimba. Ibonelela ngokuzenzekelayo inxalenye yemihla ngemihla ye-oksijini kwaye iyakwazi ukudibaniswa lula kwimpilo yemihla ngemihla. Nokuba indlela yokusebenza kunye nokuthengwa ingafakwa ngokuzimela ngaphandle koqeqesho ngebhayisikili.
Ngendlela: Uqeqesho lolo hlobo luzisa ama hormone obulili ngokufanelekileyo kwi-trot. Kukho iindlebe zokuthi abahamba ngeebhayisikili bangabathandi abangcono. Nangona kunjalo, akukho bungqina bobunzululwazi kule nto. Ngoko kuya kumntu ngamnye ukufumanisa.
Imidlalo yemidlalo / imidlalo kunye nempilo